Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Kọrịnt 8:1-24
Onyinye a nakọtara maka ụmụnna nọ na Judia (1-15)
A ga-eziga Taịtọs Kọrịnt (16-24)
8 Ụmụnna anyị, anyị chọrọ ịgwa unu gbasara amara Chineke meere ọgbakọ ndị dị na Masedonia.+ 2 Mgbe ha na-ata ahụhụ n’oge a na-akpagbu ha, ha nọ na-aṅụrị ezigbo ọṅụ, na-emesapụkwa nnọọ aka n’agbanyeghị na o nweghị ka ọ hà ha. 3 Ha nyere ihe otú ike kwere ha.+ M na-agba akaebe na ha nyedịrị karịa otú ike ha hà.+ 4 Ha nọdị na-arịọ anyị ka anyị meere ha amara kwe ka ha na-enye onyinye, ka ha sorokwa na-enyere ndị nsọ aka.+ 5 Ha mere karịa ihe anyị tụrụ anya ya. Ha bu ụzọ nyefee Onyenwe anyị onwe ha, nyekwara anyị aka otú Chineke chọrọ. 6 Ọ bụ ya mere anyị ji gbaa Taịtọs ume+ ka ọ nakọtachaa onyinye unu ji obi unu niile nye, ebe ọ bụ ya malitere ịnakọta ya. 7 Unu na-eme nke ọma n’ihe niile. Okwukwe unu siri ike. Unu ma otú e si ekwu okwu. Unu ma ọtụtụ ihe. Unu na-agba ezigbo mbọ n’ihe ọ bụla unu na-eme. Unu hụrụ ndị ọzọ n’anya n’eziokwu otú anyị hụrụ unu. Ma, na-agbakwanụ mbọ ka unu na-emesapụ aka.+ 8 Ọ bụghị iwu ka m na-enye unu, kama achọrọ m ka unu mara otú ndị ọzọ si jiri obi ha niile na-arụsi ọrụ ike. Achọkwara m ịma ma ịhụnanya unu ọ̀ bụ nke ezigbo ya. 9 N’ihi na unu ma amara Onyenwe anyị Jizọs Kraịst meere unu. Ọ bụ eziokwu na ọ bara ọgaranya, ọ dara ogbenye n’ihi unu,+ ka unu wee baa ọgaranya n’ihi ogbenye ọ dara. 10 Ihe a ka m chere:+ Ime ihe a ga-abara unu uru, n’ihi na o meela otu afọ unu malitere inye onyinye, unu jikwa obi unu niile na-enye ya. 11 Ugbu a, otú ahụ unu ji obi unu niile malite inye onyinye a, na-enyenụ ya otú aka hà unu ruo mgbe unu nyezuru ihe unu chọrọ inye.* 12 Onyinye Chineke kacha anabata bụ onyinye si mmadụ n’obi, n’ihi na Chineke na-atụ anya ka mmadụ nye ihe ọ ga-enyeli,+ ọ bụghị ihe ọ na-agaghị enyeli. 13 N’ihi na achọghị m ka ihe dịrị ndị ọzọ mfe, ma siere unu ike. 14 Kama ka e jiri ihe mafọọrọ unu mejuo ihe kọrọ ndị ọzọ ugbu a, ka e jirikwa ihe mafọọrọ ha mejuo ihe kọrọ unu, ka ihe unu nwere na ihe ha nwere wee hara otu. 15 Otú ahụ ka e dere ya, sị: “E nweghị ihe mafọọrọ onye kpooro nnukwu. Nke onye kpooro ntakịrị zukwaara ya.”+ 16 Ekele dịrị Chineke na o mere ka Taịtọs na-eche gbasara unu otú anyị si eche gbasara unu.+ 17 N’ihi na ọ bụghị naanị na ọ nabatara ihe anyị gwara ya, kama, o ji obi ya niile nabata ya. Ọ bụ ya mere o ji kpebie na ọ ga-abịa hụ unu. 18 Ma, anyị na-ezitere unu ya na otu nwanna ọgbakọ niile na-aja mma n’ihi otú o si ezisa ozi ọma. 19 Ọgbakọ niile họpụtakwara ya ka o soro anyị na-aga ebunye ọgbakọ dị iche iche onyinye. Onyinye a anyị ga-ekesa ga-eme ka e too Onyenwe anyị, gosikwa na anyị chọrọ inyere ndị ọzọ aka. 20 N’ihi ya, anyị achọghị ikesa onyinye a otú ga-eme ka e nwee onye ga-ata anyị ụta.+ 21 N’ihi na anyị ‘na-akwụwa aka ọtọ n’ihe niile, ma n’anya Jehova,* ma n’anya ụmụ mmadụ.’+ 22 Anyị na-ezitekwara unu ha na otu nwanna anyị, onye anyị chọpụtarala ọtụtụ mgbe na ọ na-agba mbọ n’ihe niile ọ na-eme. Ugbu a kwa, ọ ga-agbakwu mbọ n’ihi na obi siri ya ike na unu ga-eme nke ọma. 23 Ma, e nwee onye chọrọ ịma onye Taịtọs bụ, gwanụ ya na ọ bụ onye òtù m na onye ọrụ ibe m maka ọdịmma unu. E nweekwa onye chọrọ ịma gbasara ụmụnna ndị a, ya mara na ha na-anọchite anya ọgbakọ, na-emekwa ka a na-eto Kraịst. 24 N’ihi ya, gosinụ ụmụnna ndị a na unu hụrụ ha n’anya,+ gosikwanụ ọgbakọ dị iche iche ihe mere anyị ji jiri unu na-anya isi.
^ Ma ọ bụ “mgbe unu mechara ihe unu bidoro.”